bakhala ngokungaholi abalingisi behostela - Ilanga News
Home Izindaba bakhala ngokungaholi abalingisi behostela
bakhala ngokungaholi abalingisi behostela
KUXABENE ubendle phakathi kwabalingisi bo-mdlalo, eHostela, nabaphathi benkampani ewuqo-phayo, iStained Glass Productions, njengoba bekhala ngokungaholelwa ngenyanga eyedlule uNdasa (March).
ILANGA lithole ukuthi zimbi izinto ngenxa yokuthi iStained Glass kayisifezanga isethembiso sayo sokukhokhela abalingisi imiholo yabo.
Okhulume neLANGA, ocele lingadalulwa igama lakhe, uthe abalingisi bekumele bahole ngaphambi kokuba kumenyezelwe ukuvalwa kokusebenza ezweni.
“Ngenxa yalokhu, abalingisi bagcine ngokuvume-lana ngokuthi ngeke babuyele emsebenzini uma kuphela lezi zinsuku zokuvalwa kwezwe,” esho.
Uthe le nkampani kayisenayo ingcindezi yoku-sheshisa ukuqopha njengoba sekukhona umdlalo osufakiwe esikhaleni sawo.
Lo mdlalo bekumele ukhuze ibuya ngomhla ka-05 kwephezulu, kodwa kugcine kungenzekanga lokhu.
ILANGALangeSontolike labika ngezinye izinkinga ebezikhungethe ukuqoshwa kwalo mdlalo kodwa ebezingayithinti indaba yamaholo abalingisi.
Lo mdlalo bewukhonjiswa kuMzansi Magic (161) ngeSonto ebusuku ngo-8 kuya ku-9. Njengamanje kulesi sikhathi sekudlala iTrackers. Abanye abalingisi beHostela bafike nenkampani kaZodwa Zuma, iMizane Casting Agency, okuyiyona ebibahle-lela inhlolokhono kwiStained Glass Productions.
UZodwa uzanywe izikhawu eziningi ukuba aphawule ngalolu daba, kodwa engatholakali kanti lugcine selubanjwa yingane ucingo lwakhe.
Okhulumela iStained Glass Productions, uNomfu-ndo Zondi, uthe: “Siyazi ngezinkinga zokungaholi kwabalingisi. Inkinga kube yi-lockdown, siyathembisa ukuthi nakanjani ekupheleni kukaMbasa (April) bazoyithola imali yabo.”
Previous articleWashada isinyenyela uthisha obulawe ‘yindoda nenyanga’
Next articleeyezokudla yesabisa ngokubopha ungqongqoshe